१९ साउन, काठमाडौं । पेन्डेमिक इन्फ्लुएञ्जा H1N1 (स्वाइन फ्लू) कारण हालसम्म ६ जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । शुक्रराज ट्रफिकल तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार मृत्यु हुनेमा -स्वाइन फ्लूबाट मृत्यु हुनेमा २५ देख ५२ वर्ष उमेर समूहका तीन महिला तथा पुरुष छन् । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाका.....
सुबास दर्नाल/१ साउन – भालुको आक्रमणबाट सोलुखुम्बुमा एक जना घाईते भएका छन् । दुधकोशी गाउँपालिका ३ का ५५ बर्षिय पुर्णबहादुर कार्की भालुको आक्रमणवाट घाइते भएका हुन् । घर नजिकैको पाखामा सोत्तर काट्न गएका कार्कीलाई आईतबार दिउसो दुई बजे तिर भालुले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।.....
डा. विनय रेग्मी साधारणतया जोर्नी दुख्ने समस्यालाई हामी बोलीचालीको भाषामा बाथ रोग भन्छौं । जोर्नी दुख्नेलाई मात्र बाथरोग भनिन्छ कि यसका अरु पाटो पनि छन् ? बाथ रोग किन हुन्छ ? यसका लक्षण के-के हुन् भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा उब्जिरहेको हुन्छ । रोगबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा हामी कतिपय अवस्थामा जसले जे.....
- डा. ललितकुमार मिश्र, काठमाडौं पुस १९, २०७३- हुन त खोकी आफैंमा कुनै छुट्टै रोग होइन । तर खोकी शरीरभित्र पलाईरहेको कुनै अन्य रोगहरुको लक्षण भने अवश्य हो । सामान्य रुघादेखि लिएर दम, टी.बी र क्यानसर जस्ता भयकंर रोगहरुमा पनि खोकी लाग्ने गर्दछ । खोकी लाग्नु शरीरद्वारा कुनै रोगको लक्षणको रुपमा प्रकट गर्ने एक संकेत.....
डा. लालित कुमार मिश्र पुस ५, २०७३- जाडोको महिनामा लगभग सबैजसो प्राईभेट क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालमा विन्टर डायरिया अर्थात हिउँदमा हुने झाडापखालाका रोगिहरुको चाप निकै बढेको हुन्छ। जसमा नवजात शिशु र कम उमेरका केटा-केटीहरुको संख्या बढी हुन्छ । गर्मियाममा हुने झाडापखाला त्यति खतरनाक हुँदैन जति जाडोमा हुने.....